မိုးပြာရောင် အိပ်မက်များ: March 2008
alarm လေးက သတိပေးတယ်
Today is your birthday တဲ့..။
ဒီ၁၉နှစ် အတွင်း ဘာတွေများ လုပ်ခဲ့သလဲ.။
ဘယ်သူ့ကိုများ ထိခိုက်အောင် လုပ်ခဲ့သလဲ..။
လောကကြီးကို သာယာအောင် ဘာများ ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲ.။
သို့သော် ..နို့တစ်စက်ဖိုးတောင် မကျေနိုင်သေးပါ.။
သို့သော် ကျွေးကျေးဇူးတော့ မဆပ်နိုင်သေးပါ.။
လောကကြီးကိုလည်း သာယာအောင် ပံ့ပိုးချင်ပါတယ်
သို့သော် မနှောင့်ယှက်မိအောင် ကြိုးစားနေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်.။
ဘာတွေပဲ ဖြစ်ခဲ့.. ဖြစ်ခဲ့
စာရေးသူ ...မေပျို at 6:40 AM 10 comments
လာလည်သူတွေအတွက် Brthday Cake မျိုးစုံနော် ကြိုက်တာစား အားမနာနဲ့နော်
အဖြူရောင်Birthday Cake လေးပေါ့
ဒါလေးကတော့ သစ်သီးလေးတွေနဲ့ တမျိုးဆန်းတယ်နော်
အသဲဖြူဖြူကိတ် ကလေးကလည်း စားချင်စရာ
စာရေးသူ ...မေပျို at 11:47 PM 16 comments
တေးသီသံ နှင့် ရွက်ဝါကြွေ ရာသီပေါ့
မေမေ့ သမီးကို မွေးဖွားခဲ့တာ
မတ်လ ( ၃၁ ) တဲ့လေ
မေမေရဲ့ အိပ်မက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်
(၁၉ ) နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီပေါ့……………..။
မတ်လရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တစ်ရက်မှာ လူ့လောကထဲကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ ချစ်သမီးလေးရေ မွေးကတည်းက သမီးလေးက ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ပေါ့ ..ပန်းနုရောင်အသားအရည်နဲ့ မျက်နှာဝိုင်းလေးနဲ့ သမီးကို တွေ့တဲ့သူတိုင်းက အမေနဲ့လဲမတူပဲ မျက်နှာဝိုင်းလေးနဲ့ချောတယ်လို့ ကောက်ချက်ချ ကြတယ်လေ။
နောက်တခုက သမီးလေးကမွေးပြီးတပတ်လောက်ထိ လုံးဝမျက်လုံးမဖွင့်ဘူး သိလား..မျက်စိများ တခုခု ချို့ယွင်းနေသလား လို့ စိတ်ပူလိုက်ရတာ...နောက်မနေနိုင်တဲ့အဆုံး မေမေ့တို့ရဲ့မိတ်ဆွေ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးကို အ်ိမ်ပင့်ပြီး ပြရတယ်လေ...ဆရာဝန်ကြီးက ဘာပြောလဲ သိလား
``ညည်းသမီးက မာနကြီးနေတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး´´တဲ့လေ။ အဲလိုပြပြီး နောက်နေ့မှ မျက်လုံးလေးစဖွင့်တာ အဲဒီကတည်းက သမီးကကြီးလာရင် မာနခဲဖြစ်မယ်လို့ တွေးပြီးသားလေ…။
မေမေ့သမီးလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပ်လိမ္မာတာ။ဘယ်တော့မှဂျီကျတယ်မရှိဘူးလေ။
နောက်ဘယ်တော့မှ မပူဆာတတ်ဘူး သမီးလေးကသိပ်အေးချမ်းတာ ။ မေမေသမီးလေးကို
ဆံပင်ရှည်လေးထားပေးတာ နောက် မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ပါးနှစ်ဖက်မှာ သနပ်ခါးနဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးကို နှစ်ဘက်ခွဲချည်ပေးတာလေ။
သမီးလေးတနှစ်ကျော်အချိန်မှာ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲ သိလား ၀၀ကစ်ကစ်ကလေးလေ နောက် ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ ပါးကွက်လေးနဲ့ဆိုတော့ သွားလေရာမှာ လူတိုင်းက ချစ်ကြတယ် သိလား ။ အဲဒီတုန်းက သမီးလေး က တောက်တက် တောက်တက် နဲ့ မေမေရဲ့ အရိပ်ကလေးပေါ့ ။
သမီးလေးအတွက် နာံမည်ရွေးတုံးက အကြောင်းလေးပြောပြအုံးမယ် သိလား သမီးလေးက သောကြာသမီးလေးမို့ ``သ´´ နဲ့စတဲ့နံမည်တွေ စဉ်းစားကြတာပေါ့ `သက်လျှာ´` သက်ထား´` သက်နှင်းအိမ်´် နံမည်အမျိုးမျိုးကိုခေါ်ကြည့်လိုက် မကြိုက်လိုက်နဲ့လေ `သဲနုဝေ´ ဆိုတဲ့နံမည်လေးကိုစဉ်းစားမိတော့ ခေါ်ကြည့်မိတယ်သိလား `ဒေါက်တာသဲနုဝေ ´ လို့လေ ခေါ်ရတာ ရိုးရိုးလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ် သိလား အဲဒါနဲ့ပဲ အဲဒီနံမည်လေးအတည်ဖြစ်သွားတယ်လေ။ အဲဒီကတည်းက သမီးလေးရဲ့ အနာဂတ်ကိုမေမေက ရွေးချယ်ပေးပြီးသားလေ။
ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး ငါးနှစ်အရွယ်မှာ သမီးအတွက် မောင်လေးတစ်ယောက်မွေးပေးခဲ့တယ်လေ။ သမီးလေးဟာ မောင်လေးမွေးကတည်းက မေမေနဲ့ခွဲပြီး တစ်ယောက်တည်း အိပ်ခဲ့ရတယ်လေ။ အဲဒီတုန်းက သမီးလေးရဲ့ အတွင်းစ်ိတ်မှာ မောင်လေးကို မလိုလားစိတ်တွေ ခဏတာ ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့ မေမေ ထင်တယ် ။ မွေးကာစ မောင်လေးကို သမီးလေး သိပ်မချစ်သလိုပဲနော် ။မောင်လေးကလည်း ချူချာတော့ မောင်လေးကို ပိုဂရုစို်က်မိတဲ့အခါ သမီးလေးအမြင်မှာ မောင်လေးကို သမီးထက် ပိုချစ်တယ်လို့ ယူဆခဲ့တယ် ထင်တယ်နော်။
ဒါပေမယ့် အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ သမီးမောင်လေး ကလည်းးသမီးလိုပဲ လိမ္မာတယ် ဆိုတာ သမီးလေးသဘောပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ သမီးလေးရဲ့ တဦးတည်းသောမောင်လေးအပေါ် ချုစ်တတ်လာခဲ့တယ်။ မောင်လေးကို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ``ချစ်မောင်လေး´´ လို့ခေါ်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ အသံလေးဟာ မေမေရင်ကိုအေးမြစေပါတယ် ။
သမီးလေးကလည်း မေမေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ပညာရေုးကို လိုလားတဲ့သမီးလေးဖြစ်နေတာ မေမေကံကောင်းတာပေါ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက နှစ်တိုင်းဆုရနေကြ သမီးလေးဟာ ဆယ်တန်းမှာလဲ မေမေရည်မှန်းတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လို့ မေမေမွေးရကြိုးနပ်တဲ့သမီးလေးပါပဲလေ။
သမီးလေး ခုဆိုရင် တတိယနှစ်ရောက်ပြီ တဖြေးဖြေး လူကြီးဆန်လာလို့ သမီးဘ၀မှာ မေမေဟာအရင်လို အရေးမပါတော့ဘူးနော် အရင်က စာကျက်ရင်အနားမှာ ထိုင်စောင့်ပေးနေကျ။ ကျောင်းသွားရင် လိုက်ပို့နေကျ။ ကျောင်းအပ်ရင် မေမေပါမှလို့ဆိုတဲ့သမီးလေး။ ခုတော့သမီးခြေထောက်ပေါ်သမီးရပ်တည်နိုင်နေပြီလေ။
အရင်က ဘတ်စကားဆို မစီးရဲတဲ့ ခပ်ရွံရွံ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ခုတော့ ကျူရှင်လဲ တယောက်ထည်းသွားတတ်ပြီ။ ကျောင်းအပ်ရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ သွားတတ်ပြီ…ဒီလိုဆိုတော့လည်း မေမေကသမီးလေးအတွက် သိပ်မလိုအပ်တော့သလိုပဲနော်။ ဒါပေမယ့် မေမေရဲ့အချစ်တွေက သမီးလေးအပေါ်မှာ လျော့မသွားပါဘူးကလေးရယ်.။
မေမေဘ၀မှာ သမီးလေးနဲ့ သားလေး ဟာ အရေးပါဆုံးပဲလေ ..။ မေမေက သားနဲ့သမီး ကိုချစ်ပေမယ့် ချုပ်ချယ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးလေ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြည့်အ၀ ပေးထားတယ် နော် ။ ဒါပေမယ့် ခုထိတော့ သမီးလေးဟာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာမတွေ့ရသေးဘူးလေ ဒါကြောင့် သမီးလေးကိုပိုချစ်ရတာ သမီးလေးဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် တည်ငြိမ်ပြီး အေးဆေးသူမို့ မေမေမွေးရကျိုးနပ်တဲ့ သမီးလေး ပါပဲကွယ်။
မေမေ့သမီးလေး ဟာ နောင်အနာဂတ်မှာ မရှိဆင်းရဲသားများကို ကူညီနိုင်တဲ့ စေတနာဆရာဝန်မကြီး ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်ဖြင့် မေမေ သမီးလေးကို ခုအရွယ်ထိ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ရကျိုးနပ်ပါပြီကွယ်။
ကဲသမီးလေးရေ စာလည်းရှည်သွားပြီ ……..သမီးလေးရဲ့ (၁၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရ …မေမေ့ထံမှ` သမီးလေးသို့ပေးစာ´ ပေါ့ သမီးလေး ဒီနေ့မွေးနေ့ မှသည် နောက် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ အတူကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့နော်
(မေမေ့ရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို သမီးလေးနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်)
စာရေးသူ ...မေပျို at 11:27 PM5comments
ကျမ၏စိတ်အစဉ်တို့ကို သင်ခန်းစာထဲသို့ ပို့်ထားလိုက်သည်။ သို့သော် စိတ်သည် ဖမ်းချုပ်၍ မရသည့်အတိုင်း တခါတခါတော့ လွတ်ထွက်ချင်သည်။ စူးစိုက်ထားသည့်ကြားကပင် သင်နေသည့်စာက ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ ဖြစ်နေတတ်သည်။ စိတ်မပါဘဲ စာသင်ရသည်မှာ အလွန်ပင် စိတ်ညစ်ညူးဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ ၂နာရီပြည့်၍ စာသင်ချိန်ပြီးပြီဆိုမှ ကျမလည်း စိတ်သက်သာရာ ရသွားတော့သည်။
အတန်းပြီး၍ ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း မတ်စေ့ဂ်ျက ရောက်နေပြန်သည်။
` thansin, ur class is finished, isn't it?´
ဒီပုံအတိုင်းဆို သူသည် ကျမသင်တန်းချိန် မှန်သမျှကိုပါ သိနေပြီပေါ့။ ဒါဆို အတန်းထဲက တစ်ယောက်ယောက်များ ဖြစ်နေမလား..။ သံသယစိတ်ဖြင့် အတူတူဆင်းလာသော အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းများကို ကြည့်လိုက်မိသည်။ အားလုံးလိုလိုပင် သူတို့ဘေးနားက သူငယ်ချင်းနှင့်သာ စကားပြောနေကြပြီး ကျမကို ဂရုစိုက်မိသူဟူ၍ တယောက်တလေမှကို မရှိပါ။ ဘာမှမတတ်နိုင်သည့်အဆုံး သက်ပြင်းတစ်ချက်သာ ချလိုက်မိတော့၏။
ယုံထင်ကြောင်ထင်နှင့် တွေ့သမျှလူအားလုံးကို သံသယ၀င်နေရသည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် တစ်ပတ်တောင် ပြည့်ပြီ။ သူကလည်း မတ်စေ့ဂ်ျတို့ကို အချိန်မှန်မှန်နှင့် ပို့နေဆဲ.။ သူ မတ်စေ့ဂ်ျပို့နေကျ အချိန်မျိုးတွင် ကျမလည်း မတ်စေ့ဂ်ျများကို မျှော်နေတတ်ပြီ..။ မတ်စေ့ဂ်ျမလာပါက သူများတခုခု ဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီး စိတ်ပူနေတတ်ပြီ..။ ဟိုးတစ်နေ့ကတော့ သူ့အသံကို ကျမကြားလိုက်ရသည်။ `ဟယ်လို´ ဆိုတဲ့ အသံတစ်ခုကို ကြားရရုံဖြင့် သူဘယ်သူလဲဆိုတာ မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါ။
ယခုတော့လည်း ကျမမှာ အကျင့်တစ်ခုတိုးလာခဲ့ပြန်ပြီ။ အရင်ကဆိုလျှင် ရောက်လာသမျှ မတ်စေ့ဂ်ျအားလုံးကို ဖုန်းလေးမည်ဟု အကြောင်းပြ၍ ဖျက်တတ်သော ကျမသည် ယခုတော့ သူ့မတ်စေ့ဂ်ျများကို တမြတ်တနိုး သိမ်းထားတတ်နေပါပြီ။ အားနေသည့်အချိန်များ၊ တစ်ကိုယ်တည်း ပျင်းရိနေသည့်အချိန်မျိုးတွင် သူပို့ထားခဲ့သော မတ်စေ့ဂ်ျများကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်နေတတ်သည်။ ထိုမတ်စေ့ဂ်ျများကိုဖတ်ပြီး သူ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ခန့်မှန်းရသည်မှာလည်း ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ သူသည် ချောမောသူများ ဖြစ်လေမလား..။ ဒါမှမဟုတ် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေတတ်သူလား..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူသည် ကျမ စိတ်ပျော်ရွှင်စေအောင်တော့ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါသည်။
သူ့ကို မသိရသေးခင်က သိချင်သည့်စိတ်ဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားရသည်လည်း ရှိသလို သူ့ကို သိရမည်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြင့် ဆက်ဆံရမည်ကိုလည်း ကျမရင်မောလှပါသည်။ ကျမ မျှော်လင့်နေခဲ့သည့် ထိုနေ့ကိုတော့ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က သူ ပို့နေကျ အချိန်မဟုတ်ဘဲ မနက်စောစော ကျမထံသို့ မတ်စေ့ဂ်ျတစ်ခု ၀င်လာပါသည်။ ` သူ ဒီနေ့ ကျမကို လာတွေ့မည်´တဲ့.။ ထို မတ်စေ့ဂ်ျကို ဖတ်နေသည့်အချိန်အတွင်းမှာပဲ ကျမလက်တွေ မသိမသာ တုန်ယင်နေခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းမတက်ခင်များ ကျမကို လာခေါ်လိမ့်မလား။ အဲလိုမျိုး လာခေါ်ရင်တော့ ကျမ သင်တန်းတက်နိုင်ပါတော့မလား။ သူက ကျမအရင်ကတည်းက သိတဲ့လူများ ဖြစ်နေမလား။ တခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ သူများလား။ အစရှိသည့် မေးခွန်းတွေနဲ့ ကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာ ရှုပ်ထွေးနေသည်။ သူသည် သင်တန်းမတက်ခင်တော့ ရောက်မလာခဲ့ပါ။ စောင့်ရတာကို အင်မတန်မှ မုန်းတီးသော ကျမသည် ယခုတော့ ဘယ်အချိန်လာခေါ်မှန်း မသိသောသူ့ကို စောင့်နေရပါသည်။ သင်တန်းတက်နေစဉ် တလျှောက်လုံးလည်း မတည်မငြိမ်နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော ကျမကိုယ်ကျမ ဒေါသထွက်မိပါသည်။
လက်မှနာရီကို ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှန်း မသိ ကြည့်လိုက်မိသည်။ သင်တန်းလွှတ်ချိန် နီးကပ်လာလေလေ ကျမ စိတ်တွေလှုပ်ရှားရလေလေပါပဲ..။ ဟော.. အတန်းလွှတ်လိုက်ပြီ.။ ကျမနာမည်ကို ဘယ်သူများ ခေါ်လိုက်လေမလဲဆိုပြီး နားစွင့်ထားမိသည်။ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ရှာနေတုန်းမှာပဲ ကျမကို အရှိန်နဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က ၀င်တိုက်လိုက်သည်။ မျက်လုံးတွေ ပြာသွားပြီး ကျမလက်ထဲမှာ ကိုင်ထားသော စာအုပ်များ လွတ်ကျသွား၏။ ဒေါသတကြီးနှင့် မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျမကို ပြောင်စပ်စပ်နှင့် လူတစ်ယောက်က ငုံ့ကြည့်နေသည်။
ထိုသူ့ကို ကျမသိပါသည်။ အလွန်ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်ပြီး စည်းကမ်းမှန်သမျှကို ချိုးဖောက်သူဖြစ်သည်။ ဆော်အလွန်ကြည်သူဟု နာမည်ထွက်သူဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးပေါင်းစုံကို ထည်လွဲတွဲနေတာလည်း ကျမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ။ တွဲနေတဲ့သူတွေ များလွန်းအားကြီးသောကြောင့် ဘယ်တစ်ယောက်က သူ့ရည်းစားအစစ်အမှန်လည်း ဆိုတာတောင် ကျမ မဝေခွဲတတ်ပါ။ သူ့ကို ကြောက်လည်း ကြောက်၍ အထင်လည်း သေးပါသည်။ စကားပြောချင်စိတ်လည်း မရှိသဖြင့် ကျမစာအုပ်များကို ကောက်ပြီး လှည့်ထွက်ရန် ပြင်လိုက်ပါသည်။ ကျမ လှည့်ထွက်ပြီး ခြေတစ်လှမ်း.. နှစ်လှမ်း..
` သံစဉ် ´
ကျမကို လှမ်းခေါ်လိုက်သံ..။ သူ ရောက်လာပြီလား..။ ကျမ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်၏။ ကျမ တွေ့လိုက်ရသည်နှင့် မျှော်လင့်ချက်တွေ အားလုံး ပျက်သုဉ်းသွားသည်။ ချက်ချင်းပင် ကျမလှည့်ထွက်လိုက်သည်။ ထိုနေရာနှင့် အဝေးဆုံးကို သွားနိုင်သမျှ သွားလိုက်ချင်သည်။ လှည့်ထွက်လိုက်သည့် ခြေလှမ်းများနဲ့အတူ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုပါ ချလိုက်မိ၏။ ကျမ သိမ်းထားခဲ့သော သူ၏မတ်စေ့ဂ်ျများ အားလုံး တစ်ခါတည်းကို delete လုပ်လိုက်တော့မည်..။
ကျမအား လှမ်းခေါ်လိုက်သော `သူ´မှာ ခုနက ကျမကို ၀င်တိုက်ခဲ့သော ကျမအမြင်ကတ်လှပါသည့် `သူ´ သာ ဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်းသည် မျှော်လင့်ဖူးပါသည်။ မျှော်လင့်ချက်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်တတ်ကြသည်။ သို့သော် လောကတွင် မျှော်လင့်တိုင်းလည်း ဖြစ်မလာသော အရာများစွာ ရှိသည်။ မျှော်မှန်းသည့်အတိုင်း ဖြစ်လာသည့်အခါတွင် လူသားတိုင်း ပျော်ရွှင်တတ်ကြပါသည်။ သို့သော် မျှော်လင့်တိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့လျှင်တော့…။
စာရေးသူ ...မေပျို at 6:18 PM 15 comments
သူ.. ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျမ သိချင်လှပါသည်။
နှိုးစက်မြည်သံလေးတစ်ခုနဲ့ ကျမရဲ့မနက်ခင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နိုးနိုးချင်း ပထမဆုံး ကျမခေါင်းထဲဝင်လာသော အကြောင်းအရာကတော့ ကျမ ဒီနေ့ သင်တန်းတက်ရမည် ဖြစ်သည်။ သည်သင်တန်းကို အလွန်အမင်း တက်ချင်သဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေပြီးသည့်နောက်နေ့မှာပင် ၀င်ခွင့်ဖြေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ကျမသင်တန်းတက်ခဲ့သည်မှာ တစ်လတောင် ပြည့်တော့မည်။ အတန်းထဲက သင်တန်းသားတော်တော်များများနဲ့ ကျမခင်မင်ရင်းနှီးနေပြီ ဖြစ်သည်။
ရေမိုးချိုးပြီးသည်နှင့် အ၀တ်အစားကို ရွေးချယ်နေမိသည်။ ဘာဝတ်ရင် ကောင်းမလဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံ ၀တ်ရအောင်လည်း ကျမရုပ်ရည်က စတိုင်မိမိနှင့် ခေတ်ဆန်သည့် ရုပ်ရည်မျိုးမဟုတ်ပါ။ (ခေတ်မဆန်သော ရုပ်ရည်နှင့် လန်နေအောင် ၀တ်ထားသော မိန်းကလေးများကို ကျမဘယ်လိုမှ သဘောမကျနိုင်ပါ။) ဒါဆို စကတ်လေး ၀တ်ရမည်လား။ စကတ်နှင့်ဆိုရင်တော့ ကျမပုံစံနှင့် လိုက်ဖက်မည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ကောင်းမည်ထင်သော အကျီနှင့်စကတ်ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်သည်။
မေမေပြင်ကျွေးသော မနက်စာကို စားသောက်ပြီးနောက် လိုက်ပို့မည့်ကားကို စောင့်နေလိုက်သည်။ သည်နေ့မှပဲ ကားဆရာ ဦးလေးကြီးက နောက်ကျနေသည်။ ကျမက အတန်းထဲကို သူများထက် အရင်ရောက်မှ ကျေနပ်တတ်သူ။ ဆရာစာသင်နေမှ ၀င်ရမည့်အရေးကိုတွေး၍ ကျမသေမလောက် ရှက်လှပါသည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျမစောင့်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာကလည်း လွန်နေပြီ။ အမြန်ဆုံးသွားနိုင်မည်ဆိုရင်တောင် ယခုသွားကာမှ မီရုံကျပေမည်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အတိုင်း ကျမထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည်။ ကျမ တက္ကစီနှင့်ပဲ သွားတော့မည်ဟု မေမေ့ကို ပြောရမည်လေ။ မေမေ့အား နှုတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းကိုကိုင်ကာ အိမ်ကနေ ထွက်ခဲ့သည်။
တက္ကစီပေါ်ရောက်သည်မှ မကြာသေး..။ ကျမဖုန်းမှ အချက်ပြသံလေး မြည်လာသည်။ ကျမကိုယ်တိုင် သွင်းထားသည့်အသံလေးမို့ ကျမမှတ်မိနေပါသည်။ ကျမထံသို့ တစ်စုံတစ်ယောက် မတ်စေ့ဂ်ျပို့နေပြီ။
` Haveanice day, thansin.
ဖုန်းနံပါတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျမ မသိသော ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု..။ ကျမ နည်းနည်းတော့ အံ့သြသွားပါသည်။ ကျမဖုန်းနံပါတ်ကို သိသောသူများမှာ လက်ချိုးရေ၍တောင် ရနိုင်ပါသည်။ သူ.. ဘယ်သူများ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ပထမတော့ ဖုန်းမှားပို့သည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ဖုန်းမှားပို့သည် ဆိုရအောင်လည်း ကျမနာမည် အတိအကျကိုက မတ်စေ့ဂ်ျထဲမှာ ပါနေသည်။ ဒါ့အပြင် သည်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ကျမထံ မတ်စေ့ဂ်ျပို့နေသည်မှာ ဒီနေ့နှင့်ဆို သုံးရက်တောင် ရှိပြီ။ ကျမ ခံစားချက်ရောင်စုံကို တပြိုင်နက်ထဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ ဘယ်သူမှန်း မသိသောကြောင့် စိတ်ညစ်ညူးရသည်။ မသိသောလူတစ်ယောက်က (ကိုယ့်နာမည်အတိအကျဖြင့်) မတ်စေ့ဂ်ျပို့သောကြောင့် မိန်းကလေးပီသစွာ အနည်းငယ်ဂုဏ်ယူချင်နေပါသည်။ သို့သော် ကျမသည် ထူးခြားစွာ ချောမောလှပသူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါ။
ကျမစီးလာသော ကားလေးသည် အရှိန်မြန်မြန်ဖြင့် ရွေ့လျားနေပါသည်။ ကျမစိတ်ထင်တော့ ကျမအိမ်က ကားထက်ပင် ပို၍အရှိန်မြန်လှပေသည်။ ကားမှန်ဖွင့်ထားသဖြင့် မနက်စောစော လေစိမ်းသည် ကျမမျက်နှာအား စိမ်းသက်စွာ တိုက်ခတ်နေပါသည်။ ရေချိုးပြီးလာခဲ့သဖြင့် ကျမကိုယ်ခန္ဓာမှာ အနည်းငယ် အေးစက်နေပါသည်။ သို့သော် ကားမှန်တင်ဖို့အတွက်တော့ ကျမစိတ်ကူးမရှိပါ။ တဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်နေသော လေတွေနှင့်အတူ သူ.. ဘယ်သူလဲဆိုတာ စဉ်းစားရသည်မှာ ကျမအတွက် တမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလေသည်။
ကားရပ်သွားတော့မှ ကျမသတိထားလိုက်မိသည်။ တက္ကစီက ကျမတို့သင်တန်းရှေ့ကို ရောက်နေပြီပဲ။ ခါတိုင်း နာရီဝက်ကြာအောင် သွားရသော အသွားခရီးသည် ယခုတော့ ငါးမိနစ်လောက်သာ ကြာသလိုလို..။ ကျသင့်ငွေကို ထုတ်ပေးပြီး သင်တန်းရှိရာ အဆောက်အဦးထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်။ ၀င်ပေါက်မှာ စောင့်နေသော ဦးလေးကြီးက ကျမကို မြင်သည်နှင့် နှုတ်ဆက်နေကြအတိုင်း နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
` good morning!!! ´
ကျမ ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပြီး အပေါ်ထပ်သို့ ဆက်တက်လာခဲ့သည်။ ကျမရောက်သွားတော့ သင်တန်းစရန် ၁၀မိနစ်သာသာ လိုတော့သည်။ အခြားအတန်းက သင်တန်းသားတွေကလည်း သူတို့အခန်းရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်လို့..။ အနည်းငယ်ကျန်သော အချိန်များအား ထိုသူတွေကို အကဲခတ်ရင်းနှင့်သာ ကုန်ဆုံးလိုက်ပါသည်။ ကျမလှမ်းကြည့်နေသည်ကို တွေ့သွားပြီး ကျမထက် လယ်ဗယ်တစ်ခု ပိုမြင့်သော အတန်းမှ အကိုကြီးတစ်ယောက်က ကျမအား ပြုံးပြသည်။ သူများ ဖြစ်မလား..။ ကျမတွေးကြည့်မိပါသည်။ သို့သော်ကျမ မည်သို့မျှ မခန့်မှန်းတတ်ပါ..။
စာရေးသူ ...မေပျို at 1:08 PM 10 comments
နွေရာသီရောက်ပြီ ဆိုရင်ဖြင့် အားလုံးကြောက်ရွံကြတာ မီးဘေးပါပဲ ။ 2008 ခုနှစ်ရဲ့ဖေဖေါ်ဝါရီလ (25) ရက်နေ့ မနက် 8နာရီ မှာ မန္တလေး ရတနာပုံဈေး မီးလောင်မှုနဲ့ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ မီးလောင်မှု တပြိုင်တည်း လောင်ခဲ့တဲ့မီးဟာ ဒီနှစ်မှာ ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမီးဘေးကြောင့် မိသားစုပေါင်း (1200ကျော် ) အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ မီးလောင်မှုမှာ လှိုင်သာယာ အောင်သုခလမ်းမှစတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး သီးသန့်လမ်း၊ ခရေလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း စုစုပေါင်း လမ်းငါးလမ်းမှ အိမ်ခြေပေါင်း ၂၂၆ အိမ် မီးလောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။
မီးဘေးအတွက် အဓိက လှူဒါန်းသူများကတော့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာများ၊ Ravenသွေးလှူ၇ှင်အဖွဲ့ ၊ ပြည်တွင်းမှ စေတနာရှင်များ၊ မြန်မာပြည်မှ ဘလော့ကာများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပေးပို့တဲ့ ငွေသား သိန်းသုံးဆယ်ကျော်ကို မတည်ပြီး ပြည်တွင်းမှလည်း လှူဒါန်းသူများရဲ့ ငွေများနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ငွေသားပေါင်း သိန်းလေးဆယ့်ငါးသိန်းလောက်အထိ ကောက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရရှိတဲ့ငွေသားများကို ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှ လူငယ်များ နဲ့Raven သွေးလှူရှင် အဖွဲ့မှလူငယ်များက ဝေငှရာမှာ တက်ကြွ စွာ တာဝန်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ရရှိတဲ့ငွေသားများကို ၁၅၀၀ကျပ်တန် စပို့ရှပ် အထည် ၂၅၀၀ ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Raven BDC မှ အလှူရှင်တဦးကလည်း အ၀တ်အထည် ၃၆၅ ထည် လှူဒါန်းပါတယ်။ လှုဒါန်းမည့်နေ့ မနက် ဆယ်နာရီ အချိန်တွင် ရန်ကုန်မှ ဘလော့ကာများမှ အလှူငွေ နှစ်သိန်းထပ်မံ လှူဒါန်းသည့်အတွက် ကြက်ဥ အလုံး ၂၀၀၀ ကျော်ကို ချက်ချင်း ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှုး
ကလည်း ဗလာစာအုပ် ဒါဇင် 600 ကို လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
၁၈.၃.၂၀၀၈ ရက်နေ့ မနက်စောစောကတည်းက ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှ လူငယ်များ နဲ့Raven အဖွဲ့သားများဟာ လှူဒါန်းရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်နေကြပ်ါတယ်။ မနက်စောစော ကတည်းက လူစုပြီး ၇.၃၀အချိန်မှာ Raven BDC ရုံးခန်းမှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ မနက် ၉.၀၀နာရီမှာ လှိုင်သာယာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူများထံ သတင်းပို့ပြီးနောက် လှိုင်သာယာ အရန်မိးသတ်တပ်ဖွဲ့များကလည်း ကူညီအားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ၁၀.၃၀နာရီတွင် လှိုင်သာယာ ရေဥက္ကံဈေး ကိုရောက်ရှိပါတယ်။
လှုဒါန်းမဲ့ ပစ္စည်းများကိုနေရာချထားချိန်မှာပဲ လူထုက စည်ကားစွာ ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ နေ့လည် ၁၂.၀၀နာရီမှာ စတင်လှူဒါန်းပါတယ်။ လှူဒါန်းတဲ့နေရာမှာလဲ မိသားစုအလိုက် အထည်အရေအတွက်ကို စာရင်းများတွက်ချက်ပြီး စနစ်တကျခွဲဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက် ကြတဲ့ မီးဘေးဒုက္ခသည်များကလည်း စနစ်တကျ လာရောက်ယူငင်ကြတဲ့ အတွက် ဝေငှ၇ာမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေချောမွေခဲ့ပါတယ်။
မိသားစုအလိုက် အကျီင်္၊ဗလာစာအုပ်၊ ကြက်ဥ တို့ကို အချိုးကြ ဝေငှ ခဲ့ပါတယ်။ ဝေငှရာမှာလမ်းအလိုက် ပထမဦးစွာ ခရေလမ်း၊ ထိုနောက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊သီးသန့်လမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ၊နောက်ဆုံး အောင်သုခလမ်းကိုဝေငှခဲ့ပါတယ်။ ညနေ၆.၀၀မှာ အားလုံးဝေငှ ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။
အခုလို လှူဒါန်းမှုလေးက လိုအပ်နေတဲ့နေရာကို လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရောက်ပို့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖော်မပြတတ်အောင်ပဲ ပီတီဖြစ်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုခဲ့တဲ့ RAVEN BDC အပါအ၀င် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ စေတနာရှင် အလှူရှင်များနဲ့ လုပ်အားပေး မောင်မယ်များ အားလုံးကို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်လေ။
ကျမ ဘလော့လေးမှာ ကျမသူငယ်ချင်းများရဲ့ လှိုင်သာယာမီးဘေး ကယ်ဆယ်ရေး အကြောင်းကို တင်ပြရင်း ဒီပို့လေးနဲ့ အလှူရှင်များနဲ့ လုပ်အားပေး မောင်မယ်များကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ ...မေပျို at 5:17 PM5comments
စာရေးသူ ...မေပျို at 3:20 PM 8 comments
အခုတလော ကျမလည်း ကျောင်းတက်လိုက်၊ ဆေးရုံသွားလိုက်နဲ့ အရမ်းကို မအားမလပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်တာပါ။ အွန်လိုင်းလည်း မတက်ဖြစ်တာပါ။ လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ အားလည်းနာလှပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း သောကြာနေ့ကစပြီး ကျူတိုရီယယ် သုံးခုက တစ်ရက်ခြားစီ ဖြေရမှာမို့ အသစ်ဖတ်ရန် မျှော်နေကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျမကို ခဏလောက် သည်းခံပြီး စောင့်ပေးကြနော်။
စာရေးသူ ...မေပျို at 10:24 PM 1 comments
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မှတ်တမ်းတင် နေ့တနေ့ဖြစ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားနေ့(မတ်လ ၂ ရက် ) နေ့မှာ အမိမြေရဲ့ ရပ်ဝေးရပ်နီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများနဲ့ မြန်မာစာပေကို မြတ်နိုးတဲ့ လူတိုင်းအတွက် ဖတ်ရှုချင်စရာ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းတစောင် ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အမည်ကတော့ `လောက အလှ ´ လို့ ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အတွေးအမြင် ၊ အနုပညာ သတင်း ၊ အက်ဆေး ၊ ဟာသ၊ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုတို၊ အင်တာဗျူး ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကွန်ပြူတာကဏ္ဍ၊ ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ၊ အမျိုးသားရေးရာ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ စသည်ဖြင့် စုံလင်စွာဖော်ပြထားတဲ့ အဲဒီ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းမှာ ဘလော့လောကမှာ လူအများသိပြီး နေကြပြီဖြစ်တဲ့ အကိုစေးထူး၊ မမေဓာဝီ တို့အပြင် စာရေးသူ အတော်များများ ရေးသားထားကြတာမို့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ချင်စရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ မဂ္ဂဇင်းဆီကို သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးကတဆင့် သွားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်…။ အယ်ဒီတာများရဲ့ ပြန်ကြားချက်အရ လောကအလှ မဂ္ဂဇင်းကို အပတ်စဉ် တိုင်း Edit လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
စာရေးသူ ...မေပျို at 9:10 PM4comments